JINGHPAW KASA: ဖားကန့် အစိုးရ ဗျူဟာကုန်းမှ လူနေရပ်ကွက်များသို့ လက်နက်ကြီးမှားဖြင့်ပစ်ခတ်
ဗမာလူမျိုးတွေကဘယ်လောက်ရာထူးရှိရှိ၊ငွေဘယ်လောက်ရှိရှိ သူတို့ရဲ့ဗီဇကိုက ကလိမ်ကကျစ် ပါပီသာ။
KIO တွေသည်းခံနေတာလွန်နေပြီ၊ဒါတွေကအနိုင်ကျင့်တာပဲ။သတ္တိရှိရင်ရှေ့တန်းသွားပါလား ပြည်သူကိုလိုက်နိုပ်ဆက်တာတော့ ဗမာ ဆုပ်ပဲ။
W P mungdan hta lagu shang nga nna mung shawa hpe sinyam ten shagu jaw nga ai banau myen hpyen mahkra hpe la jang gun kau gawt kau saga.aw aw nga na yu mau nga na ten nre sai.
ကလိန်ကကျစ်ဗမာစစ်သား အစိုးရများ လူမျိုးခွဲခြား သော အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးမလိုချင်သော အစိုးရ ကချင်လူမျိုး များကို အမျိုးပြုတ်အောင် လုပ်ချင်သော ရည်ရွယ်ချက်ရှိ သော ဗမာအစိုးရ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား ဘုရားတကာထက် ဘုရား ထဝရဘုရားရှင်ရှိတာ ကိုမသိကြဘူး အသက်ရှင် တော်မူသောဘုရားက သက်တို့ကို ဒဏ်ခပ်လိမ့်မည် ကျွန် တော်တို့ ကချင်လူမျိုးများ KIA/KIO ကမင်းတို့ကို တိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး ထာဝရဘုရားက မင်းတို့ကို အမြစ် ပြတ် ဒဏ်ခတ်မည် ကြည့်ထားတစ်ကယ်ကို စောင့်ကြည့် ထာနော်။
Nov 3,2012 shani na hugawng shi ga hta 'Ning tawn ai share shagan'nga ai gabaw hte Zin Htung Naw Awng hpe shakawn shagrau ai shi ga mu hti ga ai.shagrau ai gaw gaja ai lam re.rai tim seng ang ai ni hpe ga san san mayu ai. Hpa rai na dai shara kaw M hpyen ni hpung hte hpung lung wa ai hpe shi langai sha hkap gap ra ai kun?ngu ai ga san re.laga myu tsaw hpyen la nga ai ni gaw gara kaw du taw ai.hpa rai na shi langai sha dai kaw du taw ai nchye na ai.KIO/KIA hpyen la nlaw na kun?gade nlaw ai nga tim dap langai,ahkyak ai shara langai kaw hpyen ma langai sha lu tawn da na tai hpyen hpe hkap gap ra ai ngu ai madang gaw nbyin gying ai.Rawt malan hkrun lam aten hta du daw sai hkaw ai lam nga gying ai hpe chye na ga ai.rai tim nbyin gying ai hpe gaw n-shabyin, nsi ra ai kaw gaw majoi n-si hkra gaw shim lam hkrak lu jaw ra ai ngu mu ai. KIO/KIA kaw marai langai sha ning hkap gap ra na daram masha nlaw ai gaw nre ai lam hpe mung mu chye da ga ai.ndai shi ga hpe mu hti ai shaloi shagrau da ai lam ni hpe majoi sha hti shalai madat shalai yang gaw madat mung pyaw nga ai.arawng mung la n-ngai.Tim teng sha sawn yu yang gaw lahta na salang ni up hkang ai lam hta gawng kya ai lam hpe mu lu ai majaw 'Ning Tawn ai share shagan Zin Htung Naw Awng' hpe nja nhpra let ndai lai ka hpe ka dat ai re.Gyin jaw salang ni KK kaw nyan hpa ji hpyi let hkrak ai zai ladat ni hte shawng de shanang sa wa lu mu ga kyu hpyi dat ai.
Hkam sha let,